တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: ESET NOD32 Antivirus7v7.0.302.26 (32bit & 64bit) + Activator
ESET NOD32 Antivirus7v7.0.302.26 (32bit & 64bit) + Activator
နောက်ထပ် Antivirus ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ESET NOD32 Antivirus လေး ကတော့ နာမည်ကြီးပြီးသားလူသုံးများတဲ့ Antivirus တစ်ခုပါ။ မနေ့ညကမှ Version အသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Antivirus တွေကတော့အားလုံးကောင်းကြတာချည်းပါဘဲ။ သုံးတဲ့ User တွေက ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာသုံးနေကြတာပါ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ESET NOD32 Antivirus ကိုဘဲအသုံးပြုနေတဲ့သူ နဲ့စမ်းပြီးသုံးကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Microsoft Window XP ,7, Vista , Window 8 နဲ့နောက်ဆုံးထားတဲ့ Window 8.1 မှာတောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Window 32bit နဲ့ 64bit နှစ်မျိုးစလုံးသုံးနိုင် ဖို့အတွက် နှစ်မျိုးစလုံးခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။ လိုင်စင်အတွက်လည်း Activator နှစ်မျိုးစလုံးကို ထည့်ပေး ထားပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ အောက်မှာ www.eset.com ကအတိုင်းရေးပေးထားပါတယ်။
ESET NOD32 Antivirus – providesareliable, advanced protection against threats endangering your PC. Viruses, worms, Trojan horses and other troubles now will not cause any harm to information valuable to you. Improved detection methods that are used by the program, even provide protection against future threats, which are the new worms and viruses.
Effective detection of malware not necessarily slow down your computer. NOD32 for the most part written in assembly language, and has repeatedly won awards for outstanding performance of antivirus apps. NOD32 on average, 2-5 times faster than its competitors (source: Virus Bulletin). With the switch to NOD32 will increase your system’s performance.
-Protects your system from viruses, spyware, Trojans, password stealers and other malicious programs
Posted by အောင်မျိုး at 12:20 AM